FILIPAI 1 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (FIL 1)
Ana m ekele Chineke m ekele nke ukwuu, mgbe ọ bụla m chetara unu.
Nꞌihi inyeaka nile unu na-enye, ime ka izisa ozi ọma Onyenwe anyị na-aga nꞌihu ọ bụladị ruo ugbu a.
Bụrụkwanụ ndị na-eme ihe dị mma mgbe nile, ụdị ihe ọma ahụ ga-egosi na unu bụ ụmụ Chineke, nꞌihi na nke a bụ ihe ga-ewetara Chineke otuto.
Ugbu a, nke a bụ ihe m chọrọ ime ka unu ghọta, na nsogbu nile dakwasịrị m emeela ka ọrụ ikwusa ozi ọma Kraịst na-aga nꞌihu.
Nꞌihi na ọ pụtala ìhè nye ndị nche ụlọ mkpọrọ na onye ọ bụla ọzọ nọ nꞌebe a, na ọ bụ nanị nꞌihi na m bụ onye na-eso Kraịst ka e ji tụọ m kpọrọ.
Site na mkpọrọ a a tụrụ m, e meela ka ọtụtụ ụmụnna anyị bụrụ ndị siri ike, ịmalite inwe nkwuwa okwu, izisa ozi ọma Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.
Otu ọ dị, ihe ọ bụla ha bu nꞌuche mgbe ha na-ekwusa ozi ọma adịghị ewute m. Ihe dị mkpa bụ na ozi ọma Kraịst ka a na-ekwusa. Ọ bụkwa nke a na-enye m ọṅụ mgbe nile.
Ma ọ bụrụ na ịdị ndụ ga-enye m ohere iritere Kraịst ọtụtụ ndị mmadụ nꞌuru, amakwaghị m nke ka mma, ma ọ bụ ịdị ndụ ma ọ bụ ịnwụ anwụ.
Nꞌihi na mgbe ụfọdụ ụzọ ihe abụọ na-agụsi m ike. Ọ na-agụ m ịdị ndụ na-aga nꞌihu, ma mgbe ụfọdụ ọ na-agụ m ikewapụ onwe m site nꞌanụ ahụ nke a, ka m lakwuru Kraịst, ebe mụ na ya ga-anọ mgbe nile. Ọ bụkwa ịlakwuru Kraịst kachasị ihe nile ọ bụla mma.
Ma ọ pụtara ìhè na ọ dị mkpa nye unu ma ọ bụrụ na m adịrị ndụ gaa nꞌihu.
Nꞌezie, amaara m na m nwere ọrụ nke m ga-arụ nꞌụwa. Nꞌihi ya amaara m na m ga-anọgide ịdị ndụ. Ka mụ na unu jikọtaakwa aka rụọ ọrụ Onyenwe anyị, nke ga-enyere unu aka ito eto nꞌokwukwe, na inwe ọṅụ nꞌime Kraịst.
Mgbe m si nꞌebe a pụta, bịa ileta unu, nnọkọ nke mụ na unu ga-anọkọ ga-ewetara unu ọṅụ nke ga-akwali unu inye Kraịst Jisọs otuto nꞌihi nchebe o chebere m.
na-atụghị ụjọ ihe ndị iro unu ga-eme. Iguzosi ike unu ga-agbara ha ezi ama banyere ịla nꞌiyi nke ga-abịakwasị ha. Ma nꞌebe unu nọ, ọ ga-abụrụ unu ihe ngosi si nꞌebe Chineke nọ bịa, igosi na ọ nọnyeere unu, na o nyela unu ndụ ebighị ebi.
Nꞌihi na ohere ahụ e nyere unu abụghị ohere ikwere nanị nꞌOnyenwe anyị Jisọs Kraịst, kama ọ bụ ohere ịhụkwa ahụhụ nꞌihi aha ya.